Home Wararka Sharciyan Doorashada Golaha Shacabka waxaa qaban kara Aqalka Sare.
Dalka waxaa uu leeyahay aqal sare oo sharci ah oo dhowaan la soo doortay kaas oo ka wakiil ah shacabka. Aqalka sare waxaa dooran tirada saxda ah ee uu ku bilaabi karo hawshiisa waxaana si degdeg ah looga rabaa inuu doorto guddoon iyo guddiyadiisa kadibna uu qabto doorashada golaha shacabka.
Haddii doorashada golaha shacbiga lagu wado sidaan Farmajo iyo Rooble ay rabaan oo ah inay jiitanto si loo gaaro goobta u madlan Farmajo ee Febraayo 2022 waxaa uu dalku geli doonaa qalalaase weyn oo ah waxa hadda ka socda Itoobiya.
Sidaas darted, waa in aqalka sare uu u diyaargaroobaa qabashada doorashada aqalka hoose oo uu si degdeg ah ugu hawlgalaa dhameystirka hawlaha u dhiman si uu u qaato awooddiisa sharciyeed.
Senetor Cabdi Xaashi waa inuu shacbiga ugu hiillliyaa inuu ka saaro xaaladdan walaaca ah oo uu u saaro aqal hoose oo si cadaalad ah ku yimid waana arrin uu dalka iyo dadk Somaliyeed uga tagi karo dhaxal ahaan.
RW Rooble iyo Farmajo oo hadda xilal magacaabaya iyagoo ku tartamaya burrinta wareegtooyin iyo ammarro ay soo saareen oo ah inaan wax xil ah la magacaabi Karin, dalkaan bohol ayey ka tuurayaan.
Magacaabista hay’adda Socdaalka agaasimaheeda, Bashiir Goobbe oo wasiir dowle laga dhigay iyo Madaxa hay’adda shidaalka waxay baal marsan yihiin wareegtadii Rooble horay u soosaaray.
Sido oo kale Fatmajo ayaa soo wada inuu NISA u magacaabo agaasime waa la mid oo dhaqan dowladeed maaha ee waa dhaqan fowdeyn ah oo labadoodaba ay ku tala galeen inuu muran iyo is qabsi qansi ka abuurmo si maalmo loogu mashquulo.
Ugu dambeyn si waxaan u saxmaan oo boobka hantida qaranka loo joojiyo, Ikraan cadaalad u hesho, magacaabista daneysan ee saaxibada iyo madaxdaadii hore jagooyin loo magacaabayaa ay u istaagto waa in doorashada golaha shacbiga la qabtaa oo weliba la dadajiyaa ka hor Febraayo 2022..
Si ay taasi u dhacdana waa in loo wareejiyaa aqalka sare inuu qabto doorashada golaha shacbiga maadaama uu yahay hay’adda kaliya ee sharciyesan hadda oo aan waqtiga ka dhamaan. Waana in Aqalka uu si degdeg ah u dhameystiraa guddiyadiisa iyo guddoonkiisa, haddii kale laba xildhibaan ayaa maalintii walba la soo dooranayaa ilaa 2023 waxaasa ka soo horreeya Febrayo 8 2022 oo uu Farmajo dhigi doono wacdaro laga naxo oo ay ka dhacdo kabteydii ma aragtay.